Home Wararka Xog Dheeraad ah oo laga Helay ujeedada Wareegtada Farmajo soo Saaray Hadda.
Xog Dheeraad ah oo laga Helay ujeedada Wareegtada Farmajo soo Saaray Hadda.
Farmajo oo muddu xileedkiisii Madaxweynenimo uu dhammaaday 8 Febraayo 2021 ayaa waxaa uu soo saaray wareegto aan wax sharciyad ah haysan oo uu leeyahay waxaan ku joojiyey dhulal la boobayo.
Waxay dowladdiisu horay u iibisay dhulal dhowr ah oo ay umadda lahayd waxaana ugu dambeyeey Golaha murtida madadaallada dhul uu leeyahay iyo golaha laftiisa oo laga kireystay qof lala rabay oo haddana la yiri xataa haddii Farmajo iyo gabadha laga kireeyey ay dhintaan waxaa heshiiska dhaxlaya ehelka gabadha laga kireeyey, yaab sidee loogu xeri karaa dhul dan guud ah kiradiisa hal qof iyo hal reer. Dhulkaan oo ka tirsan dhismaha Tiyaatarka islamarkaana ah meel banaan oo ka kooban dhowr boos lagu wareejiyay Shirkadda Xaawo Taako, oo ay leeyihiin ganacsato.
Waxaa yaab leh in waraabe uu leeyahay hilbaha igu rarta aan idiin ilaaliyee. Farmajo oo walaalkiisa qaadka u xeray, qofkasta oo dani ka dhaxeysana qaranka iyo hantida ummadda ugu sed buriyey haddey awood ahaan lahayd iyo haddey hanti ahaan lahayd sidee loogu aaminayaa inuu maanta na yiraahdo waxbaan dad ka ilaalinayaa?
Su’aalaha suuqa yaalla waxaa ka mid ah in Farmajo uu wax amar madaxweyne ah uu bixin karo ama wareegto uu soo saaray ay sharci ku noqon karto, maadaama uu waqtiga loo awoodsiiyey uu ka dhammaaday.
Waana iska caddahay waxa uu Farmajo arrintaan uu ka rabaa:
Waa is muujin sida Shabaabka ay maalinba qof u dilaan si loo ogaado labadoodaba inay joogaan.
Dhac iyo ujeeddo guuran oo ku hoos qarasan ama dhulal la rabo in hadda la sharciyeysto.
Marin habaabin iyo dad gaar ah oo la rabao in lagu ijaafeeyo oo Taageerayaashiisa baraha bulshada ay soo celceliyaan wuxuu Farmajo ilaalinayaa hantida qaranka, sida ciidanka oo uu kooxo u gaar lagana keenay degaanno gaar ah sameystay, kadibna baraha bulshada laga dhigo inuu ciidan dhisay. Waayo kuwii lahaa Farmajo waa oofiyaa ballamadiisa oo aad hubto akhrista inay tahay been rabbi looga furtay MOL-na ay maaqaalkan kuugu soo xertay caddeyn muuqaal iyo cod wadata oo aad indhahaaga ku arki karto.
Ugu dambeyn Farmajo waa in dalkaan degdeg looga qabtaa waayo fiiri inta dab ee uu faraha kula jiro oo gacmo kale u adeegsanayo:
Dhibaatada Guriceel oo uu gaandhariga Qoorqoor u adeegsanayo wax wahadal lagu dhameyn karo uu hub culus oo guryaha lagu dumiyo u adeegsanayo, iyadoo laga dhaxlay Xasan Kheyre oo markii hore dhibaatadaan ay wada abuureen Farmajo.
Baladweyne oo qarka u saaran inuu dab weyn ka shido si ay u gubato oo ay beelaha degaa loo barakiciyo, iyadoo la adeegsanayo maleushiyaadkii uu Farmajo shaarka ciidan u geliyey, taliyayaalna uga dhigay kuwa aan iyagaba socon Karin sida Odawaa iyo Farxaan Qaroole.
Dhuusamareeb oo ay cabsi weyn ku gadaaman tahay.
Xamar oo uu diidan yahay a) In ay doorasho bilaabato, b) In Ikraan Caddaalad loo helo iyo c) In NISA loo magacaabo agaasime yaqaanna shaqadeeda ee uu kala daba wareegayo dembiilyaal sida Fahad, Yasiin Farey iyo Cabdiraxman Dheere oo hadda loo soo wado in loo magacaabo.
Fadlan Farmajo dalka ha laga qabto haddii kale magaalo kasta oo Koofurta ku taalla waxay noqon doontaa sida Guriceel oo la isku laayey wiilal dhalliyaro jufo hoose isku ah (Ayaanle Ceyr).
Beesha Caalamka ha joojiso munaafaqadda ee ha ka soo baxaan kaalinta uga aaddan taageerada umadda Somaliyeed haddii kale maalin ayaa lagu xisaabtami doonaa shakhsiyaadka hoosta kala nool dibindaabyada Farmajo, Fahad iyo kuwa kale la mid ah sida Cumar Finish.
Dhiigga Muwadinka Ku qubeyso, laakiin Hantidooda Ilaali waa caqliga foorara ee Farmajo.